Imisebenzi yeNkqubo yokuBekwa kwiHlabathi Jikelele (GPS) | I-Singapore ephezulu ye-GPS ye-GPS Tracker ye-Autism / ye-Autistic yabantwana kunye neDementia yabantu abadala
Isishwankathelo se-GPS simele iNkqubo yokuBekwa kwiHlabathi Jikelele-eguqulweyo: Inkqubo yokuBekwa kwiHlabathi. Igama elisemthethweni (elide) libizwa ngokuba yi-Navigational Satellite Timing and Ranging - Global Positioning System, okanye i-NAVSTAR GPS ngokufutshane.
Eyona nyaniso ibalulekileyo:
-Ithekhnoloji yaqulunqwa liSebe lezoKhuselo lase-US ukusukela kwii1970s.
-GPS yafakwa ngokusemthethweni kwi-17.07.1995.
-Okwabalulekiyo: I-NNSS (Inkqubo yokuSasaza ngeNqanawa ye-Navy) yomkhosi wasemanzini wase-US, kamva "uThambo"
Iindlela ezizezinye ze-GPS: Iinkqubo ze-satellite zokuhamba zomhlaba ezisuka eRussia, China naseYurophu
-GLONASS yinethiwekhi yesatellite yaseRussia (iyasebenza).
-Beidou ligama lenkqubo yesatellite yaseTshayina (phantsi kophuhliso).
-Galileo ligama lenkqubo ye-EU satellite eyaziswa ngoDisemba 2016.
Isikhangeli se-GPS, ngokuthe ngqo ikwakhona isixhobo sokulandela umkhondo se-GPS okanye isihambisi seGPS ekuxelela yona ngesandla esinye, apho inkqubo yendawo yeGPS, umntu okanye imoto injalo. Kodwa isebenza njani umkhondo we-GPS? Ndifuna ntoni kule nto? Ngaba iyinkimbinkimbi? Ngaba ikhona into endiyifunayo? Siyicacisa ngendlela yokuba emva koko, nikwazi ukukhangela izithuthi okanye abantu.
Ukuqonda nokuba kutheni iTracker yeGPS sisixhobo esihamba ngeendlela nesiqhelekileyo, kuya kufuneka uyazi ukuba isebenza njani. Okokuqala, uphawu olubizwa ngokuba yi-GPS luyafuneka, oluthunyelwe. Ngoku zimbini iindlela ezinokuthi zenzeke ngayo unxibelelwano: nokuba ngesatellite okanye kunye neSIM khadi.
Yintoni i-GPS Tracker?
Ukubeka ngokulula, iGreater Tracker siselfowuni encinci, kuphela ngaphandle kwesiboniso kwaye ngaphandle kwekhibhodi. Kwakhona, kusekho i-chip encinci ye-GPS kwi-tracker, njengoko kunokwenzeka ukuba unayo enye kwi-smartphone yakho. Uninzi lwezi trackers zeGPS zisezincinci, zihlala zinobukhulu bebhokisi yomdlalo.
Njani indawo yokuma kum?
Ngokulula kakhulu. Kufuneka kuqala ikhadi le-SIM, kodwa ikhadi elihlawulelwayo lokuqala lanele. Ukuba awukagqibi kwisigqibo kwi-SIM khadi okanye usakhangela ujonga le SIM khadi efanelekileyo. I-GPS Tracker isebenzisa i-chip ye-GPS kwisixhobo ukumisela indawo esikuyo kwaye siyithumele kwindawo yethu yokulandela umkhondo kwe-GPS yasimahla. Oku kwenziwa ngothungelwano lwefowuni. Kwi-portal yethu yokulandela umkhondo we-GPS, le datha iya kugcinwa kwaye uya kuthi emva koko ubone i-GPS yokuhambisa kwimephu. Ukuba awufuni ukusebenzisa iseva ye-GPS efana neyethu unokufowunela ifowuni okanye uyithumele ngeSMS kwaye uza kukuphendula ngeSMS ngekhonkco leMephu zikaGoogle. Ewe, isoftware yethu yokulandela umkhondo we-GPS ikhululeke ngakumbi apha kunokuba uthumele iSMS ngalo lonke ixesha, kuba xa usebenzisa umkhondo wethu wokunxibelelana, unxibelelwano oluqhubekayo nomdlulisi weGPS luya kuba ngokuzenzekelayo. Kuya kufuneka ke ungenzi enye into ngaphandle kokungena ngegama lakho lomsebenzisi kwi-portal yethu kwaye uyakube usubona indawo yemoto okanye yomntu.
Isebenza njani iseva ye-GPS / umkhondo we-portal?
I-GPS Tracker yakho inokukuthumela indawo ngeSMS okanye ngokuthe ngqo nangokuzenzekelayo kwinethiwekhi yeselula kwiseva yethu ye-GPS. Indawo yethu yokulandela umkhondo we-GPS ifumana le datha, iyivavanye kwaye igcina le datha kwindawo yokugcina idatha. Kodwa wena njengomsebenzisi, awunanto yakwenza nazo zonke ezi mvelaphi zobuchwephesha kuba uvula nje indawo portal, faka igama lakho lomsebenzisi kunye negama lokugqitha kwaye unayo indawo ekuyo kwi-screen sakho sekhompyuter, ithebhulethi yakho okanye i-smartphone yakho.
Indawo ekuthiwa yeyokulandela umkhondo ayifuneki kubantu kuphela kodwa kunye nokulandela umkhondo wezilwanyana okanye ukulandelwa kwemoto. Ngokusebenzisa i-portal enjalo kwi-Intanethi, umsebenzisi uyakufumana izibonelelo ezininzi ngexesha elinye. Idatha yecala, kunye nendawo yangoku ye-tracker ye-GPS, inokuqwalaselwa ngokufanelekileyo. Rhoqo, iingxelo ezininzi kunye nemisebenzi ikhona ivumela ukulandela umkhondo ochanekileyo kunye nangokuchanekileyo. Ngendlela efanayo ulwazi malunga nobomi benkonzo kunye namaxesha okuhamba atyhilwa. Xa indawo ethile ishiywe, isivusi sinokuvulwa. Idatha eqokelelweyo ishwankathelwe ngokufanelekileyo kwizibuko elinjalo. Kwiportal, kuyenzeka ukuba uhlengahlengise umkhondo, osebenza kude. Ukulawula lo msebenzi, kufuneka kusetyenziswe inkqubo efanelekileyo.
GPS Tracker: Zilungele loo nto
Okokuqala nokuphambili, abafumana i-GPS basetyenziselwa ukubeka umsebenzisi. Umzekelo kwimo yeapp yeapp yeefowuni. Ezinye iiappleas zilungiselelwe iinjongo ezithile, ezinje ngebhayikhi yokuhamba intaba okanye ukuhamba uhambo olude ngeenyawo.
Enye injongo kukumiselwa kwesikhundla sezinto okanye izilwanyana zasekhaya. Le yangaphambili isetyenziswa kwindawo eyandayo hobby ethi “Geocaching”, uhlobo lokuzingela ubuncwane yi-GPS. Ityala lesibini kunokwenzeka ukuba unomdla ikakhulu kubanini bezinja abathanda ukuhamba ngaphandle nomhlobo wabo osenyongweni, apho ngamanye amaxesha uyekiswa ukuvuza. Ngekhola yenja ye-GPS, umniniyo unokuyifumana inja yakhe nangaliphi na ixesha, nokuba ayibonakali kwaye ayaziwa.
Isantya sinokulinganiswa ngokufumana indawo yento ngokwamaxesha amisiweyo amabini kunye nokulinganisa umgama phakathi kwamaxesha amabini. Oku kwenziwa zixhobo zokuhamba ngemoto, ezibonisa isantya sakho kwiikhilomitha ngeyure kwisiboniso. Ngokubanzi, uninzi lweesathelayithi okanye izikhululo zerediyo, zichanekile isikhundla sakho.
Isikhangeli somkhondo weGPS sisoloko sibizwa ngokuba sisiseko sokufumana, isixhobo sokulandela umkhondo, i-beagle okanye njenge tracker. Ayisiyomsebenzi wakho weembaleki nje xa ugijimayo kwaye ubaleka okanye ukhenketha ungabhalwa kakuhle kwaye uphinde wakhe, kodwa isixhobo singaphezulu kakhulu. Zininzi iindawo apho ukhuseleko ngokubanzi lunokuphuculwa ngokubekwa kweliso kwi-GPS. Umzekelo, ukuba abazali banexhala lokuba abantwana babo sele befikile esikolweni, kunconyelwa ukulandelwa iGPS Tracker. Ewe kunjalo, oku kuyasebenza nakwindlela egodukayo. Ngexesha likaxakeka, abantu abanesifo sengqondo esixhalabisayo banokufumaneka ngokukhawuleza. Ukuba iingozi zenzekile okanye umnxeba ufuna uncedo ngeholide okanye uhambo luyimfuneko, esi sixhobo sinika ukhuseleko olungako. Kwiimoto, izithuthuthu, iibhayisekile kunye nezinye izithuthi, oku kukhokelela kukhuseleko olufanelekileyo lobusela. Kwakhona, imithwalo okanye ezinye izinto zexabiso ezinokufumaneka lula nge-tracker ye-GPS kunye nokubekwa kweliso kwi-GPS.
5413 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-24 Namhlanje
Isebenza njani iGlobal Positioning System (GPS)…
Amanqaku kunye neMisebenzi ye-SPY efihlakeleyo ye-Magnetic…
Izinto ukwazi malunga ne-GPS Tracking System
Ungayikhetha njani eyona GPS yokuKhangela indlela kwi…